Zhengheng ပါဝါက ယူတယ်။ အင်ဂျင်ပိတ်ဆို့လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်း မဟာဗျူဟာမြောက် တိုးတက်မှုအမှတ်သစ်အဖြစ် စိုက်ပျိုးရေးစက်ယန္တရားများ
2012 ခုနှစ်တွင် Zhengheng ပါဝါသည်အမိန့်ကိုအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့သည်။အိမ်ရာပုံသွန်းSuzhou Kubota ထုတ်ကုန်၏ အချောထည်ပစ္စည်းများကို ပုံသွန်းခြင်းနှင့် စက်ပြုပြင်ခြင်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် Suzhou Kubota Agricultural Machinery Co., Ltd. မှ f40b ထွန်စက် clutch shellမပူးပေါင်းမီတွင် Suzhou Kubota နှင့် Japan Kubota ရုံးချုပ်မှ Zhengheng powe နှင့် ပတ်သက်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဤထုတ်ကုန်၏ထူးခြားချက်များ- 1. Zhengheng ပါဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောအကြီးဆုံးတစ်ခုတည်းအလေးချိန်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည့်ကြီးမားသောအလေးချိန် (107 ကီလိုဂရမ်)၊2. ပါးလွှာသောနံရံဒီဇိုင်း၊ အပါးလွှာဆုံးအပိုင်းသည် 3mm ဖြစ်ပြီး သွန်းရန်ခက်ခဲသော၊3. မြင့်မားသောသည်းခံမှုလိုအပ်ချက်များ;4. ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစက်ဝန်းသည်တိုတောင်းသည်။Suzhou Kubota ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တိုးတက်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်၊ Zhengheng ပါဝါသည် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အစမ်းတပ်ဆင်မှုနမူနာ ၁၀ ခု၏ ပထမအသုတ်ကို ၃ လအတွင်း ပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါသည်။Zhengheng ပါဝါသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံနှင့် အထူးကောင်းမွန်သော R&D စွမ်းရည်ဖြင့် သဘောတူထားသည့်အချိန်အတွင်း နမူနာများကို ပေးပို့ရန် အတူတကွလုပ်ဆောင်သည်။Suzhou Kubota မှ စစ်ဆေးပြီး အတည်ပြုပြီး အောင်မြင်စွာ တပ်ဆင်စမ်းသပ်ပြီး၊ Suzhou Kubota နှင့် Japan Kubota ရုံးချုပ်မှ အလွန်ချီးကျူးခံရသော ဤထုတ်ကုန် 1200 နှင့် 2000 အစုံကို 2013 နှင့် 2014 ခုနှစ်များတွင် အသီးသီး မှာယူခဲ့ပါသည်။
အောင်မြင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။clutch shell စီမံကိန်းKubota ကုမ္ပဏီ၏ စိုက်ပျိုးရေးစက်ယန္တရားလုပ်ငန်းတွင် Zhengheng ပါဝါဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသော လမ်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။စာရင်းဇယားများအရ 2015 ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်၏ လယ်ယာသုံး စက်ယန္တရား ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းအားသည် 2.08 သန်းအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းအားမှာ အံ့အားသင့်ဖွယ် 13 သန်းအထိ ရောက်ရှိခဲ့သည်။Suzhou jiubaotian နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် Zhengheng ပါဝါသည် စိုက်ပျိုးရေးစက်ယန္တရားလုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးပေးသည့် နည်းပညာနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံကို ရရှိခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် clutch အိမ်ရာစီမံကိန်းကို မှတ်ကျောက်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူကာ ဆက်လက်၍ ရည်မှန်းချက်ထားပြီး နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တူးဆွပြီး ၎င်းကို ရယူပါ။အင်ဂျင်ဆလင်ဒါပိတ်ဆို့လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်း မဟာဗျူဟာမြောက် တိုးတက်မှုအမှတ်သစ်အဖြစ် စိုက်ပျိုးရေးစက်ယန္တရားများ